Israa Al-Ghomgham, vehivavy Saodiana miatrika sazy ho faty noho ny fihetsiketsehana milamina · Global Voices teny Malagasy
Israa Al-Ghomgham, vehivavy Saodiana miatrika sazy ho faty noho ny fihetsiketsehana milamina
Voadika ny 05 Novambra 2018 3:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, Español, Português, Italiano, русский, English
Miatrika fanamelohana ho faty any Arabia Saodita ilay mpiaro ny zon'olombelona Israa Al-Ghomgham, noho ny asany mifandraika amin'ny zon'olombelona tsy manao herisetra.
Nosamborina tamin'ny taona 2015 niaraka tamin'ny vadiny, mpikatroka Mousa Al-Hashim i Al-Ghomgham noho ny andraikitr'izy ireo tamin'ny hetsi-panoherana ny governemanta tao Al-Qatif tamin'ny taona 2011, rehefa niparitaka nanerana an'i Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra ireo fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia.
Hetsika #FreeIsraa, niparitaka tao amin'ny Twitter.
Monina ao amin'ny Faritany Atsinanana, izay ahitana ny ankamaroan'ny Shiita vitsy an'isa – izay mandrafitra ny 10 ka hatramin'ny 15 isanjaton'ny mponina ao amin'ny firenena i Al-Qatif. Miatrika ‘fanavakavahana fandresen-dahatra an-katerena” ao amin'ny fanjakàna maro an'isa Sonita ireo Miozolomana Shiita, anisan'izany ny fitsarana tsy ara-drariny eo amin'ny rafi-pitsarana, ny fitsabahan'ny governemanta amin'ny fombafombam-pivavahan'izy ireo, ny fanilihana azy ireo amin'ny asam-panjakana, ary koa ny fanilikilihana sy kabary fanavakavahana, araka ny filazan'ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona.
Miaraka amin'ireo Shiita Saodiana maro hafa, nanohitra ireo tsy rariny ireo i Al-Ghomgham sy ny vadiny ary nitaky ny hanandratan'ny governemanta Saodiana ny zo maha-olombelona azy ireo.
Miatrika fiampangana valo i Al-Ghomgham, anisan'izany ny “fanomanana, fandefasana sy fametrahana fitaovana izay manohintohina ny filaminam-bahoaka” araka ny Andininy faha-6 ao amin'ny Lalàn'ny Heloka Antserasera taona 2007. Voampanga ho “nitarika fihetsiketsehana sy tanora hanohitra ny fanjakana sy ny mpitandro ny filaminana tao amin'ny tranonkala tambajotra sosialy” ihany koa izy, ary famoahana sary sy lahatsarin'ireo hetsi-panoherana ireo tamin'ny aterineto. Mitady fanamelohana ho faty amin'ny raharaha momba azy ireo mpampanoa lalànan'ny fanjakana.
Notsaraina tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra 2018 teo anatrehan'ny fitsarana miady amin'ny mpampihorohoro, ny Fitsarana Heloka bevava Manokana (SCC) izy. Natao ny 28 Oktobra ny fakana am-bavany faharoa, saingy tsy nisy nentina teo amin'ny fitsarana na izy na ireo voampanga hafa, hoy ny tatitry ny Foibe Helon-drano ho an'ny Zon'Olombelona. Fantatra fa ho atao amin'ny 21 Novambra ny fakàna am-bavany manaraka.
Androany no natao ny fitsarana faharoa an'i #IsraaAlGhomgham, saingy tsy nisy tao na i Israa na ireo mpikatroka hafa voampanga.
Tsy fantatra hoe nahoana ny fitondrana Saodiana no tsy nitondra azy ireo tao amin'ny efitrano fitsarana
Hotontosaina amin'ny Alarobia 21 Novambra ny fotoam-pitsarana fahatelo.
Ankoatra an'i Al-Ghomgham, olona dimy hafa no notsaraina tao amin'ny SCC tamin'ity herinandro ity noho ny fiampangana azy ireo mifandraika amin'ny fampiharana ny zon'izy ireo amin'ny fahalalaham-pitenenana, hiditra fikambanana sy hanao fivoriana, araka ny nambaran'ny Amnesty International. Nandrakitra tranga valo izay ahitàna ireo mpikatroka miatrika fanamelohana ho faty ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona:
Maneho fanairana manoloana ny manjo ireo mpikatroka am-polony izay gadraina tsy misy fiampangana na fitsarana sy ireo izay tsarain'ny SCC ankehitriny ny antso miverimberina ataon'ny fampanoavam-panjakana amin'ny fampiasana ny fanamelohana ho faty ho an'ireo olona valo farafahakeliny tao anatin'ny telo volana.
Anisan'ireo niatrika fitsarana tamin'io herinandro io ilay mpitondra fivavahana Salman al-Awda. Nosamborin'ny manampahefam-panjakana izy tamin'ny Septambra 2017 ary nanameloka azy tamin'ny fandikan-dalàna maromaro, anisan'izany ny antso ho fanavaozana sy fanovàna fitondrana ao amin'ny faritra Arabo. Miatrika fanamelohana ho faty ihany koa izy.
Nandritra izany fotoana izany dia tonga tany Torkia tamin'ny Alatsinainy ny mpampanoa lalàna an'i Arabia Saodita, Saod al-Mujibra mba hiditra amin'ny famotorana momba ny famonoana ilay mpanao gazety Jamal Khashoggi tao amin'ny masoivoho Saodiana tao Istanbul. Matetika irahina i Al-Mujib mba hanenjika ireo mpifanandrina ara-politika ao amin'ny fitondram-panjakana, sy ireo izay manohitra ny Printsy Mpandova Mohammed Bin Salman, mpitondra tsy voafidy ao amin'ny fanjakana. Nanome tsiny an'i Bin Salman ny mpitarika manerana izao tontolo izao, miampanga azy ho nandray anjara tamin'ny famonoana ilay mpanao gazety.
Maro no manontany tena hoe ahoana no ahafahan'i Bin Salman mitady ny rariny ho an'i Jamal no sady mitady fanamelohana ho faty an'ireo izay mampiasa ny zon'izy ireo amin'ny fahalalaham-pitenenana.
Nankany Torkia ilay mpampanoa lalàna Saodiana izay nitady fanamelohana ho faty ho an'ny raiko @salman_alodah sy ny hafa noho ny fikatrohan'izy ireo am-pilaminana mba hiresaka momba ny fahafatesan'i #khashoggi izay maty novonoina noho ny fikatrohany am-pilaminana!